Global Voices teny Malagasy » Namelona Indray Ny Realisma Sosialista Tsy Misy Ny Sosialisma Ny Antoko Mitondra Ao Makedonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Jona 2016 9:58 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Alemaina, Aotrisa, Makedonia, Romania, Shina, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina
Nanambara ny fandraisam-baovao tsy miankina Nova  fa nanome baiko hanao sary hosodoko goavana mihoatra ny 50 mampiseho ny vanimpotoana manantatara izay fanaon'ny Antoko Komonista teo aloha ny antoko mpitondra ao Makedonia.
Niteraka adihevitra ny baiko noho ny antony maro, amin'izany indrindra, nangatahana ho atao amin'ny fomba realista sosialista  ny sary hosodoko, raha nanome endrika ny tenany ho miady amin'ny komonista ny antoko VMRO-DPMNE , sady mpikambana ao amin'ny “afovoany-ankavanana” izay Antokon'ny Vahoaka Eoropeana  . Maro tamin'ireo manampahefana ao amin'ny antoko, na ny ray aman-dreniny, no mpikambana ambony tao nandritra ny fitondrana komonista  .
Mampiseho ihany koa ny antoko mpitarika amin'izao fotoana izao Nikola Gruevski  sy ny mpiara-miombon'antoka aminy akaiky amin'ny fomba miharihary ny sary hosodoko, raha araka ny hita dia toa tena fanompoana olona [mg] . Miseho miaraka amin'ny vadiny izy amin'ny sary sasany, ary voalaza fa iray amin'ireo sary hosodoko tsiambaratelo mampiseho azy miaraka amin'ireo zanany vavy sy ny reniny izany. Voalaza fa 4 sy 8 metatra ny refin'ny sary hosodoko.
Fa ny zava-dehibe kokoa, nametraka ny fanontaniana hoe iza no handoa ny sary hosodoko ny zoro fandraisam-baovao Nova, izay vita avy amin'ny sisiny mivolombolamena izy rehetra. Mitentina an-tapitrisany euros maro ny asa-tànana rehetra. Mpanao hosodoko avy any Okraina sy Bolgaria ireo nanao azy, izay efa nanao fifanarahana karama tamin'ny governemanta teo aloha mba hiasa ao amin'ny tetikasa Skopje 2014  .
Natao tamin'ny volam-bahoaka tamin'ny alalan'ny Monisipaly ny zaridaina kely manoloana ny foiben'ny antoko, izay voaravaka marika mifandraika amin'ny Fikambanana Revolisionera Makedoniana , ilay hetsika manantantara izay antsoin'ny antoko hoe “fidinana.” Ny mpandoa hetra Makedoniana ihany koa no nandoa ny vola nanaovana ny loharano izay ampahany amin'ny Skopje 2014 nalaina tahaka avy amin'ny Andrin'i Trajan ary misy mariky ny antoko eo amin'ny tampony (ny liona misy rambony roa).
Noho ny hetsi-panoherana “Revolisiona Maro Loko”  amin'izao fotoana izao, mijanona ho faritra tsy azo idirana ny foiben-toeran'ny antoko sy ny zaridaina kely ao Skopje, izay feno mpiambina mitam-piadiana avy amin'ny mpitandro filaminana.
Nanondro  ny asakanto izay manome voninahitra an'i Nicolae Ceaușescu  any Romania sy ny vadiny ny mpisera Twitter @Zivce_Ivanova;
Nanondro ny sary hosodokon'i Mao Zedong  any Shina ny mpisera Twitter iray hafa, @ parg0.
Manamarika ihany koa ireo olom-pirenena fa ny manam-pahefana ao amin'ny antoko amin'izao fotoana izao dia somary miseho amin'ny fomba manintona kokoa. Ohatra, aseho somary lava kokoa i Gruevski, raha oharina amin'i Martin Protuger ilay mpanara-dia azy lava be .
Nilaza  ny mpanao hosodoko Matej Bogdanovski raha niresaka tao amin'ny onjam-peo Deutsche Welle fa maka ny endriky ny realisma sosialista ireo sary hosodoko ireo, izay “natao hampisehoana ny fomba fisainan'ny fotoana vaovao, ny firehan-kevitra vaovao (Komonisma), ny fandrosoana sy ny hasambaran'ny mpiasa ao anatiny” tao amin'ny Vondrona Komonista Atsinanana izany. Nataon'i Bogdanovski ho ” fiovana” karazana ireo sary hosodoko vaovao ireo, na izany aza, milaza izy fa mitoetra ny “fanehoana realista” tsy misy ilay “hasambaran'ny mpiasa”. Nailika tanteraka ny olon'ny firenena, hoy izy, izany hoe misy ny fikasana an-kolaka tiana hambolena hoe “mitovy sy iray ihany ny fanjakana sy ny antoko, fa isika rehetra tsy misy manan-danja.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/11/83589/
 Nanambara ny fandraisam-baovao tsy miankina Nova: http://novatv.mk/ukrainsko-art-stsenario-vo-partiskata-zgrada-na-vmro-dpmne/
 realista sosialista: https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_realism
 Antokon'ny Vahoaka Eoropeana: http://www.epp.eu/
 ambony tao nandritra ny fitondrana komonista: https://globalvoices.org/2014/05/10/investigative-journalists-report-on-macedonian-government-officials-hidden-wealth/
 tena fanompoana olona [mg]: https://mg.globalvoices.org/2014/11/15/65670/
 tetikasa Skopje 2014: http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en
 Fikambanana Revolisionera Makedoniana: https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Macedonian_Revolutionary_Organization
 hetsi-panoherana “Revolisiona Maro Loko”: https://globalvoices.org/2016/04/27/anatomy-of-a-macedonian-colorful-revolution/
 Martin Protuger ilay mpanara-dia azy lava be: http://narodenglas.com/wp-content/uploads/2015/04/protuger-gruevski-protoger1.jpg